သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နေကြသူတွေကို ဘဝနဲ့ရင်းလို့ အားပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ Jewel
2 May 2018 . 5:26 PM
မယ်လိုဒီဝေါ (Melody World) ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် Season6မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျူဝယ်(Jewel) က အခုသီချင်းဆိုပြိုင်နေကြတဲ့ သူတွေကို အားပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူမအနေနဲ့ ဂျူဝယ် (Jewel) ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုကို ပရိသတ်မသိရှိခင်ကဘယ်လိုတွေကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆို တာကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လို Message ပေးချင်ပါသလဲ?
“သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်ကတော့ ပြိုင်ပွဲပေါ့ ဒါပေမယ့် သူများတွေနဲ့မပြိုင်ပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲ ပြိုင်စေချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဥပမာ Level တစ်ခုကို တက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားသင့်တာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဆိုနိုင်ဖို့နဲ့ ကိုယ်တိုင်က အမှားမရှိဘဲ တင်ဆက်နိုင်ဖို့ က အရေးကြီးပါတယ် အဲ့နည်းကိုပဲ ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျရှုံးခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတတ်မှုပေါ်မှာပဲ မှုတည်ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်သွားလို့ရပါတယ်”။
အောင်မြင်မှုမရခင် စပ်ကြားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို Message မျိုးကိုပေးချင်ပါသလဲ?
“ကိုယ်တိုင်ကလည်းရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကိုထားတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်အခက်အခဲ တွေ ကြုံခဲ့ရင်တောင်သေးသေးလေးတွေလို့ ပဲသဘောထားခဲ့မိပါတယ်။ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေအချင်းချင်းဖလှယ်ချင်တာကတော့ ရန်ကုန်ကိုစရောက်ခါစက စားဝတ်နေရေးအတွက် အပြင်မှာပိုက်ဆံရှာရတဲ့ အခါ ဆိုင်မှာစဆိုရတာတွေရှိခဲ့တယ်။Unplugged တီးဝိုင်းတွေမှာ ဆိုတော့ ညတွေသွားဆိုရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဝတ်စားထားတဲ့ အင်္ကျီကို သူများတွေကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေပေါ့နော် ဒါမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်”။
The Four အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Jewel
“တစ်ရက်ကိုမှ အဲ့တုန်းက ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံက ၇ ထောင်ဆိုရင်တောင် taxi ခနဲ့တစ်ည ကိုဘယ်လောက်မှမကျန်ဘူးလေ ဒါပေမယ့် လည်း ဒီလိုသီချင်းဆိုပြီးတော့ မှရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကိုစုပြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခက်အခဲကတော့ သီချင်းသွားဆိုရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာ ကိုယ့်ကိုကြည့်ကြတဲ့ တချို့ မျက်လုံးတွေ လောက်ပါပဲ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ သီချင်းဆိုနေရတဲ့ အတွက်တော့ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာတော့ ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး” ဆိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းစွာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Jewel Facebook
သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲဝငျနကွေသူတှကေို ဘဝနဲ့ရငျးလို့ အားပေးစကားဆိုလိုကျတဲ့ Jewel
မယျလိုဒီဝေါ (Melody World) ပွိုငျပှဲကို ၂၀၁၂ ခုနှဈ Season6မှာ ယှဉျပွိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ ဂြူဝယျ(Jewel) က အခုသီခငျြးဆိုပွိုငျနကွေတဲ့ သူတှကေို အားပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ သူမအနနေဲ့ ဂြူဝယျ (Jewel) ဆိုတဲ့ နာမညျတဈခုကို ပရိသတျမသိရှိခငျကဘယျလိုတှကွေိုးစားရုနျးကနျခဲ့ရတယျဆို တာကိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။
သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ တှနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ပွိုငျပှဲဝငျတဲ့သူတှကေိုဘယျလို Message ပေးခငျြပါသလဲ?
“သိသလောကျပွောရမယျဆိုရငျ ခေါငျးစဉျကတော့ ပွိုငျပှဲပေါ့ ဒါပမေယျ့ သူမြားတှနေဲ့မပွိုငျပဲနဲ့ကိုယျကိုယျတိုငျနဲ့ပဲ ပွိုငျစခေငျြတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဥပမာ Level တဈခုကို တကျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့စိတျထဲမှာထညျ့ထားသငျ့တာက ကိုယျကိုယျတိုငျအကောငျးဆုံးဆိုနိုငျဖို့နဲ့ ကိုယျတိုငျက အမှားမရှိဘဲ တငျဆကျနိုငျဖို့ က အရေးကွီးပါတယျ အဲ့နညျးကိုပဲ ကိုယျတိုငျလညျးကငျြ့သုံးခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ကရြှုံးခဲ့ရငျပဲဖွဈဖွဈ အောငျမွငျခဲ့ရငျပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့စိတျထားတတျမှုပျေါမှာပဲ မှုတညျပွီးတော့ ရှဆေ့ကျသှားလို့ရပါတယျ”။
အောငျမွငျမှုမရခငျ စပျကွားမှာကွုံတှေရေ့တဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ပတျသကျလို့ဘယျလို Message မြိုးကိုပေးခငျြပါသလဲ?
“ကိုယျတိုငျကလညျးရောငျ့ရဲတငျးတိမျနိုငျတဲ့ စိတျကိုထားတယျ ဆိုတော့ ကိုယျတိုငျအခကျအခဲ တှေ ကွုံခဲ့ရငျတောငျသေးသေးလေးတှလေို့ ပဲသဘောထားခဲ့မိပါတယျ။ ကွိုးစားနတေဲ့ သူတှအေခငျြးခငျြးဖလှယျခငျြတာကတော့ ရနျကုနျကိုစရောကျခါစက စားဝတျနရေေးအတှကျ အပွငျမှာပိုကျဆံရှာရတဲ့ အခါ ဆိုငျမှာစဆိုရတာတှရှေိခဲ့တယျ။Unplugged တီးဝိုငျးတှမှော ဆိုတော့ ညတှသှေားဆိုရတဲ့ အခါမြိုးမှာ ဝတျစားထားတဲ့ အကငြ်္ီကို သူမြားတှကွေညျ့တဲ့ မကျြလုံးတှပေေါ့နျော ဒါမြိုးတှကေို ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ”။
The Four အဖှဲ့ ဝငျတဈဦးလညျးဖွဈတဲ့ Jewel
“တဈရကျကိုမှ အဲ့တုနျးက ကိုယျရခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံက ၇ ထောငျဆိုရငျတောငျ taxi ခနဲ့တဈည ကိုဘယျလောကျမှမကနျြဘူးလေ ဒါပမေယျ့ လညျး ဒီလိုသီခငျြးဆိုပွီးတော့ မှရတဲ့ ပိုကျဆံတှေ ကိုစုပွီးရုနျးကနျခဲ့ရတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အခကျအခဲကတော့ သီခငျြးသှားဆိုရတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးတှမှော ကိုယျ့ကိုကွညျ့ကွတဲ့ တခြို့ မကျြလုံးတှေ လောကျပါပဲ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ သီခငျြးဆိုနရေတဲ့ အတှကျတော့ ဒီအလုပျကိုလုပျရတာတော့ ပငျပနျးတယျလို့မထငျခဲ့ပါဘူး” ဆိုပွီးတော့ ပှငျ့လငျးစှာပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။